Faayidaa-Addaa Oromiyaan Magaalaa Finfinnee irraa argachuu qabdu – OROMP4 Studio
Finfinneen Magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya’e labsii lakk.94/1997 kwt.2(3) irratti tumameera. Heerri mootummaa RDFI kwt. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu waan taateef Faayidaan-Addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu ni eeggama jedha.
Faayidaan-Addaa kuniis tajaajila hawaasaa, qabeenya uumamaa, bulchiinsa waliinii fi dhimmota biroo kana fakkaatan akka ta’e heerichi ni tuma. Tarreeffamni isaa immoo seeraan akka murtaa’u tumameera.
Haa ta’u dhimma kana ilaachisee hanga ammatti seerri bahe hin jiru. Yeroo ammaa garuu Mootummaan faayidaa kana qoratee seera baasuuf hojjachaa jira. Kanaaf anis seerri bahu dhimmoota armaan gadii hammachuu qaba yaada jedhu qaba. Isaanis:-
1. Tajaajila hawaasaatin (social service) walqabatee bu’uraaleen misooma Magaalaa Finfinnee kanneen akka ibsa, daandii, giddugala fayyaa, manneen barnootaa fi kkf; Hawaasa Naannoo Oromiyaa keessatti argamaniis fayyadamaa taasisu qabu.
2. Qabeenyi uumamaa Magaalaa Finfinnee hawaasa naannoo ishee jiraniifis ooluu qaba. Gama biraatin warshaaleen Finfinnee keessatti argaman qabeenya uumama Naannoo Oromiyaatti fayyadamu. Qabeenya uumamaa fi hawaasa naannoo irratti miidhaa qaqqabsiisu. Kanaaf galii warshaalee fi qabeenya uumamaa kanneen irraa argamu hammi ta’e faayidaa ummata Naannoo Oromiyaatiifiis haalli itti oolu danda’u uumamuu qaba.
3. Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee keessatti Oromiyaa barcuma (reserved seat) qabaachuun barbaachisaadha.
4. Finfinneen handhuura Oromiyaa fi Magaalaa guddoo Oromiyaa waan taateef aadaa fi afaan oromoo babal’achuu qaba; iddoowwan seenaa fi eenyummaa ummataa agarsiisan babal’achuu qabu.
5. Manni murtii dhimmoota Oromiyaa ilaalu Finfinnee keessatti hundeessuu. Keessattuu seerri deemsa falmii yakkaa manni murtii Oromiyaa yakkoota wajjiraalee fi qabeenya naannichaa irratti raawwataman ilaaluu akka danda’ u beekkamtii kennuu qaba.
6. Faayidaalee biroo kana fakkaatan.
Kanaafuu seerri bahu faayidaalee Oromiyaan argachuu qabdu ifatti kan tarreessu ta’uu qaba. Seericha hojirra oolchuuf caaseffamaa fi sirna diriirsuu qaba. Seerotni Bulchinsa Magaalaa Finfinneetiin bahan faayidaa kana calaqqisuu qabu.
Karoorri hojii fi bajataa Magaalaa Finfinnee faayidaa kanaa fi kkf haammachuu qaba.
* Sultan Abdo is a Training Coordinator at Oromia justice Sector Professionals Training and Legal Research Institute. He obtained LL.M in law and development at University of Warwick.